Ivandry: Namory ireo mpanao politika mifanandrina ny CFM
vendredi, 11 mai 2018 21:08
Tao amin’ny toeram-ponenan’ny solontenan’ny Papa Ray Masina etsy Ivandry, androany zoma 11 mey 2018, no nampihaonan’ny Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) ireo mpanao politika mifanandrina, fototry ny krizy eto Madagasikara.
Ny filoha nasionalin’ny antoko HVM sady filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao sy ny minisitry ny Asam-panjakana, ny fanavaozana ny raharaham-panjakana, ny Asa ary ny lalàna sosialy, Maharante Jean de Dieu, no nisolotena ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Olivier Donat Andriamahefaparany, Sekreterana jeneralin’ny antoko Tiako I Madagasikara sy ny minisitry ny fambolena sy fiompiana teo aloha, Rolland Ravatomanga, no nisolotena ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.
Ny minisitra tamin’ny tetezamita nisahana ny fifandraisan-davitra sy ny paositra ary ny teknolojia vaovao, Augustin Andriamananoro, sy ny mpitondrateny ny antoko, MAPAR Pierre Houlder, no nisolotena ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina.
Ny Sekretera nasionalin’ny antoko Arema, Simon Pierre, sy ny Sekretera nasionaly lefitra, Annick Ratsiraka, no nisolotena ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka.
Tsy voasolotena ny filoha teo aloha Pr Zafy Albert.
Nitari-bavaka nanokafana ny fotoana ny Solontenan’ny Papa, Mgr Rocco Gualteri.
Fihaonana savaranonandro eo amin’ny samy Malagasy ihany izao, hoy ny filohan’ny CFM, Maka Alphonse, ary dingana ho fikatsaham-bahaolana hamahana ny krizy.